Manganese Boride Powder, MnB2 - Goodao Technology Co, Ltd.
Inogona kushandiswa semhando yeanti-oxidation, anti-erosion uye nekuvandudza iyo yekupisa simba ye boron additives, inoshandiswa seyanyukireya indasitiri, yemauto indasitiri superconducting zvinhu uye zvimwe zvinhu zvitsva.
Molecular fomula MnB2
CAS Nhamba 12228-50-1
Nzvimbo yakanyunguduka Aihwa
Kushanda inogona kushandiswa senge mhando yeanti-oxidation, anti-erosion uye kugadzirisa simba remhepo re boron zvinowedzera, zvinoshandiswa seindasitiri yenyukireya, maindasitiri ehondo mashandisirwo ezvinhu nezvimwe zvinhu zvitsva.
Chirungu zita: Manganese Boride
Kuwanikwa uku kwakaitwa nechikwata chakatungamirwa naQiu Guangchun, purofesa paoyoyama Gakuin University Dhipatimendi reSainzi neTekinoroji. Iyo superconducting zvinhu zvine superconducting yekuchinjisa tembiricha yakakwira seTc = 39K (-234 ℃) apo kuramba kunodonha kusvika zero. Kuwanikwa kunonyorazve rekodhi yeisiri-yendarira oxide superconducting zvinhu Tc. VaAkiko vakaita musangano nevatori venhau musi wa 26 Kukadzi 2001 vachizivisa zvakabuda mutsvakiridzo iyi. Masangano anoverengeka ekutsvagisa muJapan nekune dzimwe nyika "akasimbisa" chokwadi ichi kuburikidza nemimwe bvunzo (International Center for Superconducting Industrial Technology Institute of Superconductivity wechipiri Research Director, Suko Tajima et al.). Iyo yepamusoro iyo superconducting tembiricha yekufambisa, iyo iri nyore kwazvo kushandisa. Iyo Tc ye39K haina kunyanya kukwirira.
Parizvino, vanhu vawana yepamusoro-tembiricha superconductor (HgBa2Ca2Cu3O8) ine Tc ye134K (-139 ℃). Kuwanikwa kweye superconductor nyowani kwakwezva kutariswa nekuda kwekuumbwa kwayo. Munguva yakapfuura, kupisa kwakawanda kwakanyanya kwakawanikwa nemhangura oxides. Nekuti oxide yemhangura ndeye yekiramiki kirasi, "zvinonetsa kugadziriswa kuita mutsetse, saka haisati yashandiswa kusvika zvino" (Qiu Guang). Zvichienzaniswa neizvi, iyo simbi yakakomberedzwa manganese diboride ine zvinotevera zvinotevera.
(1) Manganese (Mg) uye boron (B) zvakachipa uye zvinowanika nyore. "Uyu ndiwo mubatanidzwa wakanakisa weindasitiri" (Autumn).
(2) Sezvo tembiricha yekufananidza iri 700 ℃ chete, saka yekugadzira neyekugadzirisa mutengo yakaderera.
(3) Iyo yepamusoro superconducting yezvinhu zvealloy ine Mg simbi zvinhu uye manganese diboride haizokanganisike kunyangwe ikagadziriswa muiyo alloy state.
(4) Sezvo ichingori inoumbwa nezvinhu zviviri, zviri nyore kugadzira mumafirimu matete.
Izvo zvinhu zviri padyo padyo neSQUID (superconducting quantum kukanganisa chipenga) chinodiwa.
Pashure: Niobium Boride Upfu, B2Nb
Zvadaro: Molybdenum Boride Upfu, MoB2